Fri, Jul 10, 2020 at 1:07pm
‘अपराधिक सुचि’मा अभिनेता सलमान खानको नाम ! अब सलमानलाई के हुन्छ ?
एजेन्सी, काठमाडौं कालो हरिण मारेको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइए पनि बलिउड अभिनेता सलमान खान जमानतमा रिहा भएका छन् । तर उनको नाम आपराधिक सूचीमा राखीएको छ । भारतको वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रोल व्युरोले अपराधीहरूको सूचीमा सलमानको नाम पनि राखेको हो । यो लिष्टमा ३९ जना अपराधी रहेका छन् । लिष्टको सबैभन्दा पुछारमा सलमानको नाम छ । यो व्युरोको लिष्टमा हरिणदेखि बाघको शिकार..
२९ अप्रिलमा सोनम कपुरको बिहे ब्वाइफ्रेन्ड आनन्द आहुजासंग !
एजेन्सी, ३० चैत बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरले ब्वाइफ्रेन्ड आनन्द आहुजासँग बिहे गर्ने भएकी छिन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले सोनमको मे महिनामा बिहे हुने उल्लेख गर्दै आएका थिए । तर, नयाँ खबर अनुसार सोनम र आनन्दको बिहे यही अप्रिलको २९ तारिखमा हुनेछ । उनीहरूको बिहे स्विट्रल्यान्ड वा लन्डनमा हुने समाचार फैलिएको थियो । मिडियाहरूले ११ र १२ मेमा उनीहरूले बिहे गर्ने समाचार प्रसारण गरेका..
प्रियंका चोपडा रंगभेदको सिकार, आफ्नो छालाको कलरले गर्दा फिल्म गुम्यो !
मुम्बई, २९ चैत बलिउडबाट हलिउडमा तर्फ आर्कर्षित भएकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफू रंगभेदको सिकार बनेको खुलासा गरेकी छन्। हलिउडमा रंगभेद र जातीय भेदभाव अस्तीतत्वहिन भएको ८० वर्ष पुगे पनि समय समयमा कलाकारहरु यसको सिकार बन्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रियंकाले रंगभेदकै कारणले धेरै वटा फिल्म आफूले गुमाउनु परेको तथ्य खुलाएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले भनिन्, ‘मैले..
अदालतले सलमानलाई विदेश जान रोक लगाएपछि ‘रेस ३’को बाँकी सुटिङ भारतमै
एजेन्सी, २८ चैत सलमान खान अभिनित फिल्म ‘रेस ३’का निर्माता रमेश तौरानीले फिल्मको पाँच दिनको सुटिङ बाँकी रहेको बताएका छन् । बाँकी सुटिङ विदेशमा हुनेवाला थियो । तर सलमानको कोर्ट केसका कारण अब फिल्मको बाँकी सुटिङ भारतमा हुने भएको छ । जमानतमा जेलबाट छुटेका सलमान अदालतको आदेश विना भारत बाहिर जान सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कानूनी प्रक्रियामा गएर इजाजत लिने झन्झटबाट बच्न निर्माण..
एजेन्सी, चैत २७ फिल्म ‘राजी’मा आलिया भट्ट कश्मीरकी छोरी, पाकिस्तानी सेनाकी श्रीमती र भारतीय जासूसको गरी फरक–फरक भूमिकामा देखिएकी छिन् । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता विक्की कौशलको फिल्म ‘राजी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । फिल्म ‘राजी’ को कहानी सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको यूद्धमा आधारित फिल्म हो । यस फिल्मको कहानी हरिन्दर सिक्काको उपन्यास ‘कलिङ्ग सहमत’मा आधारित रहेको छ..
अजय देवगन स्टारर फिल्म ‘रेड’ सय करोड क्लबमा प्रवेश
काठमाडौं, २६ चैत अजय देवगन स्टारर फिल्म ‘रेड’ सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । फिल्मले अहिलेसम्म १००.१४ करोड कमाएको छ । यो सँगै अजयका ७ फिल्म सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि उनका ‘गोलमाल ३’, ‘सन अफ सरदार’, ‘बोल बच्चन’, ‘शिवाय’ र ‘सिंघम’ले सय करोडको आँकडा पार गरेका थिए । ‘रेड’ १६ मार्चमा रिलिज भएको थियो । राजकुमार गुप्ताले निर्देशन..
सलमान खान जेठ १२ गते नेपाल आउदै, सोनाक्षी सिन्हा सहित दर्जन कलाकार साथमा
२६ चैत, काठमाडौं : अघिल्लो महिना स्थगित भएको सलमान खानको नेपाल भ्रमण आगामी जेठ १२ मा हुने भएको छ । कालो हरिण शिकार अभियोगमा जेल गएका सलमान धरौटीमा रिहा भएलगत्तै नेपालमा गर्ने भनिएको कार्यक्रमका लागि मिति तय गरेका हुन् । नेपालस्थित आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टलाई मुम्बईमा रहेको जेए इभेन्ट्सले पठाएको पत्रमा मे २६ तारिख अर्थात् जेठ १२ गते सलमानको दबङ टूर नामक सो आयोजनाका..
जेल बाट रिहा भएपछि सलमानलाई भेट्न घर पुगिन् कट्रिना, प्रेम छुटेता पनि एकअर्कासँग नजिक !
एजेन्सी, २५ चैत दुर्लभ कृष्णसारको सिकार गरेको आरोपमा जेल चलान गरीएका अभिनेता सलमान खानलाई पूर्व प्रेमिका कट्रिना कैफले भेटेकी छिन् । सलमानलाई अदालतले जमानतमा रिहा गरेपछि उनलाई भेट्नका लागी बलिउडका सेलिब्रेटीहरु उनका घरमा पुगेका छन् । यसअघि प्रिती जिन्टा सलमानलाई भेट्न जेलमै पुगेकी थिईन् । अभिनेत्री कट्रिना कैफ सलमान जेल मुक्त हुने बित्तिकै उनलाई भेट्न उनको घरमा पुगेकी छिन् । केही वर्षअघि सलमान..
‘शत्रु गते’ हेर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगे सिटी म्याक्समा
काठमाडौँ, २४ चैत : सधैँ राजनीतिक बैठक र कार्यक्रममा व्यस्त हुने दुई नेता शुक्रबार साँझ नेपाली चलचित्र ‘शत्रु गते’ को दर्शक बन्न भ्याएका छन् । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बागबजारस्थित सिटी म्याक्समा पुगेर दुई घण्टा ‘शत्रु गते’ हेरेका हुन् । चलचित्र हेरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले चलचित्र सामाजिक परिवेशलाई आधार बनाएको हुनाले राम्रो..
यसरी कट्यो कैदी नम्बर १०६को बिल्ला भिरेका सलमान खानको जेलमा पहिलो रात !
काठमाडौँ, २३ चैत : भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई कृष्णसारको शिकार गरेको आरोपमा पाँच वर्षको जेल सजाय भएसँगै सलमानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो र उनलाई जोधपुर जेलमा कैदी नम्बर १०६ को नाम दिईएको छ जसअनुसार खानले पहिलो रात जेलमा बिताएका छन् । कृष्णसारको शिकार गरेको १९ बर्ष अगाडिको मुद्दामा जोधपुर अदालतले खानलाई हिजो कैद सजायसहित दस हजार जरिवानाको फैसला गरेको हो । मुद्दामा मुछिएका अभिनेता..
पत्रकार ओझाको ‘वारिको डाँडामा म...’ गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ, २३ चैत : पत्रकार अनुप ओझाको पहिलो गीत ‘वारिको डाँडामा म...’ सावर्जनिक भएको छ । युट्यूबमार्फत शनिबार सार्वजनिक भएको गायककै शब्दमा सागर राजले संगीतबद्ध गीतको भिडियो द नेक्स्टले बनाएको हो । दुई युवाको बाल्यकालीन मित्रताको सन्दर्भ समेटेको उक्त गीतमा “पढाइ वा अरू कारणले दुई मित्रमध्ये एकजना देश बाहिर र अर्को देशभित्रै रहनुपर्दा सम्झना हुने विगतलाई गीतले लय दिन खोजेको छ”, गायक ओझा..
आइटम गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कंगनाको माग, समाज र बालबालिकाका लागि हानिकारक रहेको जिकिर
काठमाडौँ, २२ चैत : अभिनेत्री कंगनाले फिल्ममा आइटम गीत उत्तेजक र अश्लिल हुने भएकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेकी छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कंगनाले फिल्ममा आइटम गीत उत्तेजक र अश्लिल हुने भएकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कंगनाको माग छ । ‘त्यसकारण पनि मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि फिल्ममा दर्शकले आइटम गीतमा देखेका छैनन् । किनकि यस्तो गीतमा नृत्य गर्दा आफूलाई केही फाइदा हुँदैन..
६ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर एक युवती सलमान खानको अपार्टमेंटमा ! आखिर किन ?
काठमाडौँ, २१ चैत सेलीब्रिटीका फ्यानहरु उनीहरुको एक झलक पाउन कति सम्म गर्छन भन्ने हालै सलमान सँग भेट्ने औधी चाहनामा एक युवतीले गरेको हर्कतले बताएको छ । सलमानलाई लुकी छिपी पर्खाल नाघेर भेट्न जाँदै गर्दा ती युवतीलाई ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टका सेक्युरीटी गार्डहरुले पक्राउ गरेका थिए । अभिनेता सलमान खानलाई भेट्ने पागलपनमा एक १६ बर्षीया युवतीले ६ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर उनको अपार्टमेन्टमा पुगेकी छन्..
टाइगर श्रॉफको ‘बागी २’को चार दिनकै कलेक्सन सय करोडको आँकडामा
बलिउड चलचित्र ‘बागी २’ ले बक्स अफिसमा शानदार सुरुवात गरेको छ । बलिउड नायक टाइगर श्रॉफ र नायिकाको ‘बागी २ “ले बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शनको सिलसिला जारी राखेको हो । शुक्रवारबाट रिलिज भएको फिल्म ‘बागी २’ले बक्सअफिसमा आक्रामक कलेक्सन गरेको छ । फिल्मले पहिलो दिन २५.१० करोड कलेक्सन गर्दै ‘पद्मावत’ को पहिलो दिनको कलेक्सन रेकर्ड समेत तोडेको थियो । फिल्मको चार दिनको कलेक्सन रिपोर्ट..
'बागी २' बन्यो २०१८ मा पहिलो दिनमा सर्वाधिक कमाई गर्ने बलिउड चलचित्र
काठमाडौँ, १८ चैत बलिउड चलचित्र ‘बागी २’ ले बक्स अफिसमा शानदार सुरुवात गरेको छ । अभिनेता टाइगर श्राफ र अभिनेत्री दिशा पटानी अभिनित चलचित्र ‘बागी २’ ले प्रदर्शनको पहिलो दिनमै २५.१० करोड रुपैयाँ कलेक्सन गर्दै सन् २०१८ सालको पहिलो दिनमा सबैभन्दा धेरै ओपनिङ्ग गर्ने चलचित्र बनेको छ । चलचित्र पद्मावतले राखेको रेकर्ड बागी २ ले तोडिदिएको छ । यस्तै, चलचित्र बागी २..
बलिउडमा आउनुअघि यस्ता देखिन्थे टाईगर श्राफ, हेर्नुहोस बाल्यकालदेखिको दुर्लभ तस्बिरहरु:
काठमाडौँ, १६ चैत बलिउड अभिनेता टाईगर श्रफको फिल्म ‘बागी २’ मार्च ३०बाट दर्शकमाझ रिलिजमा आईसकेको छ । फिल्ममा हामी टाईगर श्राफको एकदमै सुगठित शरीर देख्न सक्छौं । तर कमैलाई मात्र थाहा छ कि उनि फिल्म जगतमा आउनुभन्दा अगाडी निकै फरक देखिन्थे । हेर्नुहोस बलिउड आउनुआघिको उनका केहि तस्बिरहरु : ..
जीरो साईज फिगर बनाउने क्रममा करिनाको भयो बेहाल, सबैले दिए ‘अस्थिपञ्जर’ को संज्ञा
काठमाडौँ , १५ चैत जीरो साईज फिगर बनाएकी अभिनेत्री करिना कपुरलाई अहिले सबैले खिल्ली उडाउँदै ‘अस्थिपञ्जर’ को संज्ञा दिएका छन् । जीरो साईज फिगर बनाउने ध्याउन्नमा अभिनेत्रीहरु नखाई नखाई आफ्नो शरीरलाई कतिसम्म जिर्ण बनाउँछन् भन्ने हालै करिना कपुरको शरीरलाई देखेर अनुमान गर्न सकीन्छ । फेसन डिजाइनर मनीष मल्होत्राका लागि र्‍याम्प वाक गर्नुअघि खिचाएकी तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा राखीएपछि धेरैले तस्वीरको खिल्ली उडाउँदै ‘अस्थिपञ्जर’..
बबी देओलको करिअर बनाईदिंदै सलमान खान , ‘भारत’ र ‘किक २’मा खेल्ने पक्का
काठमाडौं, १४ चैत । सलमान खान बलिउडमा धेरै कलाकारको करियर बनाइदिने भएकाले उनीहरुको निम्ति 'गडफादर' नै भएका छन् । उनि बलिउडका सुपरस्टार हुनुको साथसाथै दोस्रो कलाकारलाई स्टार बनाउन पनि माहिर छन् । मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार, सलमान यतिबेला सनी देओलका भाई बबी देओलको करिअर सुधार्न लागीपरेका छन् । बबी ‘रेस ३’ मा सलमानसँग देखिँदैछन् । यस फिल्मको सुटिङको क्रममा बबीको काम देखेर दबंग..
नेपाली फ्यानलाई टाइगर श्रफ र दिशा पटानीको संदेश, थाहा पाउनुहोस् उनीहरुले के भने ?
काठमाडौं, १३ चैत । बलिउड चलचित्र 'वाघी २'मा टाइगर श्रफ र दिशा पटानीले अभिनय गरेका छन् । नेपालमा उक्त चलचित्र प्रचार गर्ने उदेश्यले नेपाली दर्शकहरुलाई सम्बोधन गर्दै भिडियो बनाएका हुन् । उनीहरुले नेपाली दर्शकलाई नयाँवर्ष २०७५ को शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । भिडियो सन्देश मार्फत अभिनेत्री दिशा पटानीसंगै उनले नयाँ वर्षको सुभकामना ब्यक्त गर्दै आफ्ना आगामी फिल्म ‘बाघी २’ हेर्न उत्साह दिएका..
१०औं ब्वाइफ्रेन्डसँग पनि ब्रेकअप गरिन् अभिनेत्री सुष्मिता सेनले, थाहा पाउनुहोस उनको ब्वाइफ्रेन्डहरु को-को थिए
काठमाडौँ, १२ चैत अभिनेत्री सुष्मिता मिस युनिभर्सको ताज लगाएपछि बलिउडमा भित्रिएकी हुन् । उनले केही सफल र केही असफल चलचित्र अभिनय गरेकी छन् । बलिउड उनका लागि खासै लाभदायक सिद्ध हुन सकेन । तर पनि उनी हमेसा चर्चामा रहन भने सफल भइन् । उनको चर्चाको विषय हमेसा ब्वाइफ्रेन्डसँगको ब्रेकअप बन्यो । अभिनेत्री सुष्मिताले अहिलेसम्म १० जनासँग डेट गरेकी छन् । थाहा..
रिलिज अगावै सलमान खानको ‘रेस ३’ को किर्तिमान, फिल्मको स्याटेलाइट राइट्स १ सय ५० करोडमा विक्रि
भक्तपुर, ११ चैत बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको ईद रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘रेस ३’ लगातार खबरमा छाएको छ । फिल्मको लुक्सदेखि नयाँ स्‍टारकास्‍टसम्म सबै चर्चामा छ । यसैबीच यो फिल्मले रिलिज अगावै करोडौं रुपैयाँको विजनेश गरेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार फिल्मको स्याटेलाइट राइट्स पूरै १ सय ५० करोडमा विक्रि भएको छ । सलमानको मार्केट मुल्यका कारण फिल्मको राइट्स डबल रेटमा खरिद..
यी हुन् बलिउडका फ्लप भएका रिमेक गीतहरु, जसलाई दर्शकले त्यति रुचाएनन् !
काठमाडौँ, ९ चैत गीत रिमेक गर्दैमा हित हुन्छ भन्ने छैन । तर रिमेक गरेर गीत राख्दा फिल्म र स्वयम् गीतले राम्रो चर्चाका साथ आम्दानी बढाउने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । यस क्रममा कयौँ रिमेक गरिएका गीतहरु फ्लप पनि भएका छन् । पछिल्लो दशक पुराना गीतहरुलाई रिमेक गरेर फिल्ममा राख्ने चलन बढ्दै गएको छ । बलिउडमा पनि यो चलन रहेको छ । बलिउडका रिमेक तर, फ्लप..
बलिउडका यी १५ चर्चित गायक/गायिकाहरु, जो अहिले काम बिहिन् छन्
काठमाडौं, ८ चैत । बलिउडमा एक समय यस्तो पनि थियो, जब बलिउड म्यूजिक इन्डस्ट्री केही चल्तीका गायक–गायिकामा निर्भर थियो । यी तीनै गायक–गायिक हुन्, जो फिल्ममा एक्टर्सको आवज बन्थे । उनीहरूले गाएका गीत आज पनि हामी सुन्छौं र गुनगुनाउँछौं । उनीहरूले आफ्नो आवजका माध्यमबाट फिल्ममा संगीतको रंग बदले । बलिउडमा जब यीनीहरूको आवजको जादु, त्यो बेला पनि थियो र अहिलेसम्म पनि कायम छ..
अजयको ‘रेड’ले अक्षयकुमारको ‘प्याडम्यान’लाई उछिन्यो, अहिलेसम्म कति कमायो ?
काठमाडौं, ६ चैत । अजय देवगन स्टारर ‘रेड’ले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको छ । २०१८ मा रिलिज भएका फिल्ममध्ये ‘पद्मावत’ मात्र एउटा यस्तो फिल्म हो जसले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार गरेको छ । ‘रेड’ले सोमबारसम्म ४६ करोड कमाएको छ । पहिलो विकेन्डको रिपोर्टलाई आधार मान्दा ‘रेड’ले ४१.०१ करोड कमाएको छ । ‘प्याडम्यान’ले पहिलो विकेन्डमा ४०.०५ करोड कमाएको थियो । ‘रेड’ ३४ सय स्क्रिनमा..
सलमानले हरेक फिल्ममा सर्ट फुकाल्नुको कारण के होला ? थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौँ, ५ चैत बलिउड अभिनेता सलमान खानका प्रसंसकहरु उनको सुगठित शरीरमा आफ्नो होस् गुमाउने गर्छन । हुनपनि बलिउड अभिनेता सलमान खानले अभिनय गरेका प्राय फिल्ममा तपाईं उनले सर्ट खोलेको दृष्य देख्न सक्नुहुन्छ । प्रदर्शोन्मुख फिल्म ‘रेस-३’ मा पनि उनले केही सिनमा सर्ट फुकाल्नेछन् । आखिर सलमान आफ्नो नांगो ज्यान देखाउन किन यति आतुर बन्छन् ? एक अन्तरर्वाताको क्रममा सलमानले भनेका छन् ‘सुगठित..
कसरी परेको थियो रणवीर कपूर र दीपिका पादुकोणको लभ ? थाहा पाउनुहोस् यिनको प्रेम कहानी
एजेन्सी, मुम्बई, चैत्र ४ । बलिउड अभिनेता रणवीर कपूर र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कुनै समय गहिरो प्रेममा डुबेका थिए । तर, अब यो इतिहास भइसकेको छ । अहिले रणवीर र दिपिकाको पुरानो अन्तरवार्ता भाइरल बनेको छ । अन्तरवार्तामा उनीहरुले आफूहरुबिचको प्रेमसम्वन्धबारे खुलेर कुरा गरेका छन् । पीपल म्यागजिनलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनीहरुले यो प्रेम कसरी सुरु भएको थियो भन्ने पनि खुलासा गरेका छन्..
२५ वर्ष लागिन आलिया भट्ट, ६ वर्षमै गरेकी थिइन् फिल्ममा डेब्यु
काठमाडौँ चैत २ बलिउडमा पछिल्लो पुस्ताकी सफल हिरोइन हुन् आलिया भट्ट । उनी आजदेखि २५ वर्ष लागेकी छिन् । उनका दुई फिल्म ‘राजी’ र ‘डे्रगन’ प्रदर्शनको क्रममा छन् । धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ, फिल्ममा आउनुअघि आलिया निकै मोटी थिइन् । उनको वजन ६७ किलो थियो । उनले डेब्यु फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ इयर’ का लागि १६ किजो वजन घटाएकी थिइन् । प्रसिद्ध निर्देशक महेश..
आमिर खान अब इन्स्टाग्राममा, मनाए आफ्नो ५३ औँ जन्मदिन
काठमाडौँ चैत १ बलिउड सुपरस्टार आमिर खान बुधबारबाट ५३ वर्षमा लागेका छन्। आफ्नो ५३ औँ जन्मदिनको उपहारस्वरुप उनी पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पनि जोडिएका छन्। इन्स्टाग्राममा प्रवेशसँगै लाखौँ फ्यानबाट ‘फलो’ गरिएका उनले आफ्नी आमाको कलेज जीवनको फोटो पोष्ट गरेका छन् । 'दंगल' नायक आमिर बलिउडका सबैभन्दा सफल मेघास्टार मानिन्छन्। उनका सबैजसो सिनेमाहरुले कमाईको उच्च रेकर्ड मात्र बनाएका छैनन् , सामाजिक विषयहरुमा उनले..
सलमान खान अब मे ५ मा नेपाल आउने, कार्यक्रममा कुनै बाधा नपुग्ने आयोजकको विश्वास
काठमाडौँ, २९ फागुन बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान नेपाल आउने नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चेतावनीपछि स्थगित भएको उनको कार्यक्रम अब मे ५ लाई सरेको हो । दबंग द टुरु नाम दिइएको यो कार्यक्रम मे ५ का लागि पक्का भएको आयोजक ओडिसी इन्टरटेन्मेन्टकाले जानकारी दिए । टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल..
सनी लियोन अब सानो पर्दाको कार्यक्रममा, सनीलाई राम कपुरको साथ
२८ फागुन, काठमाडौं बलिउड अभिनेत्री सनी लियोन अब सानो पर्दाको कार्यक्रममा आउने भएकी छिन् । सनीले अभिनेता राम कपुरसँग ‘कमेडी हाइ स्कुल’ नामको कार्यक्रममा भाग लिएकी हुन् । उक्त कार्यक्रमको दुई श्रृंखलाको छायांकन सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसक्रममा सनीले राम कपुर उत्कृष्ट कलाकार भएको तथा उनमा राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । राम कपुर उक्त कार्यक्रमका प्रस्तोता हुन् । सनीका अनुसार..
Results 550: You are at page 13 of 19